कोपा उपाधि : सर्वाधिक रुचाइयो मेस्सीको फोटो, डी मारियाले खोपे ट्याँटू ! – Ktm Dainik
कोपा उपाधि : सर्वाधिक रुचाइयो मेस्सीको फोटो, डी मारियाले खोपे ट्याँटू ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कोपा उपाधि : सर्वाधिक रुचाइयो मेस्सीको फोटो, डी मारियाले खोपे ट्याँटू !
२८ वर्षे उपाधिविहीन यात्राको अन्त्य गर्दै अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिकाको उपाधि जितपछि विश्वभरिकै फुटबल समर्थकमा खुसी बढेको छ । अर्जेन्टिनाले उपाधि जितेर कप्तान लियोनल मेस्सीको करिअरलाई न्याय मिलेको भन्ने भावना लिएका फुटबल समर्थक बढ्ता खुसी भएका हुन् ।
उक्त कुराको उदाहरण कप्तान मेस्सीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा राखेको फोटो हो, जुन फोटो इन्स्टाग्राममा सर्वाधिक रुचाइएको तस्बिर बनेको छ । मेस्सीले उपाधि लिएर बसेको फोटो खेलकुद क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी लाइक पाउने फोटो बनेको हो ।
उनको उक्त फोटोले एक साताभित्रै २० मिलियनभन्दा धेरै लाइक पाएको छ, जुन खेल क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै धेरै हो । उनको फोटोले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोस्टलाई उछिनेको छ ।
यसअघि २५ नोभेम्बर २०२० मा रोनाल्डोले डिएगो म्याराडोनाको समवेदनास्वरूप फोटो हालेका थिए । जुन अहिलेसम्मकै धेरै लाइक पाएको फोटो थियो । तर उक्त तस्बिरलाई उछिन्दै मेस्सीको फोटो सर्वाधिक धेरै लाइक पाउने फोटो बनेको हो ।
डी मारियाको ट्याँटू
समर्थकमा मात्र नभएर खेलाडी स्वयममा पनि उत्तिकै उत्साह छ । अर्जेन्टिनाको सिनियर टिमबाट पहिलो ट्रफी जितेका मिडफिल्डर एन्जल डी मारियाले आफ्नो शरीरमा उपाधिकै ट्याँटू बनाएका छन् । डी मारियाले तीघ्रामा ट्रफीकै ट्याँटू खोपेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ट्याँटू देखाउँदै उनले लेखेका छन्, ‘आखिर त्यो दिन पनि आयो, मैले एक ट्रफी आफ्नो शरीरमा बनाउने वाचा गरेको थिएँ, जसलाई म आफ्नो शरीरमा जीवनभरि नै राख्न चाहन्थेँ ।’
अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिकाको उपाधि दिलाउँदा डी मारियाले नै निर्णायक गोल गरेका थिए । गत आइतबार आयोजक राष्ट्र ब्राजिललाई उसैको मैदानमा १–० गोलले हराउँदै अर्जेन्टिनाले २८ वर्षे उपाधिविहीन यात्राको अन्त्य गरेको थियो ।
डी मारियाले ४७औँ संस्करणको कोपा अमेरिकामा ६ खेल खेलेका थिए । जसमा उनले एक गोल गरे । तर उनको एक गोल नै अर्जेन्टिनालाई उपाधि जिताउन निर्णायक बनेको थियो । डी मारियाले अर्जेन्टिनी सिनियर टिमबाट पहिलो उपाधि जितेका हुन् । यसअघि उनले सन् २००७ मा यु–२० विश्वकपको उपाधि जितेका थिए ।